उच्च माविमा पहिलो महिला प्राचार्य
जिल्लामा पहिलो पटक उच्च माविको नेतृत्व महिलालाई दिईएको छ । भैरव उच्च मावि वीरेन्द्रनगरको प्राचार्यमा भुमिसरा चपाईलाई नियुक्त गरिएको छ । प्राचार्य छनोट समितिको सिफारिस, अभिभावक, विद्यार्थी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सल्लाहमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले चपाईलाई प्राचार्य नियुक्त गरेको हो ।
जिल्लाका ४२ वटा उच्च माविहरुमा महिला प्राचार्य नियुक्ति पहिलो भएको जनाईएको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले महिलाको नेतृत्वमा संचालन भएका विद्यालयहरु सफल हुँदै गएको बताए ।
lल्लामा संचालित पाँच सय १७ भन्दाबढी विद्यालयहरुमा थोरै विद्यालयमा मात्रै महिलाहरुले नेतृत्व गरेका छन् । चपाईलाई पाँच बर्षका लागि प्राचार्य पदमा नियुक्ति दिईएको छ । सुर्यप्रकाश उच्च मावि विद्यालयबाट शिक्षण प्रारम्भ गरेका प्राचार्य चपाईले नेराप्रावि तोक्मा, नेराप्रावि सिमलगैरा आग्रीगाउँ, जनज्योति उच्च मावि वड्डीचौर, खाँडदेवी उच्च मावि चौरासे, जनसेवा उच्च मावि घुस्रा र उच्च मावि वीरेन्द्रनगरमा शिक्षण गरेका थिए ।
शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उर्तिण गरेका प्राचार्य चपाईले आफ्नो कार्यकालमा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ‘अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक स्टार्फ साथीहरुसंग समन्वय गरी विद्यालयमा गुणस्तर, सिकाई उपलब्धी बढाउने काम गर्नेछु’–प्राचार्य चपाईले भने ‘आफ्नो कार्यकालमा विद्यालयलाई जिल्लामै नमूना बनाउँछु ।’
सामुदायिक विद्यालयतिर अभिभावकको आक्रर्षण तथा अभिभावकको चाहन पुरा गर्न अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण गराउने, विद्यालयमा विद्यार्थीलाई टिकाई राख्ने आफ्नो कार्ययोजना रहेको बताईन । पूर्णदेवी भट्टको नेतृत्वमा स्थापना भएको भैरव उच्च मावि विद्यालय कन्या विद्यालयको नामले सुरुवात भएको थियो । २०१४ सालमा विद्यालय स्थापना भएको थियो । उच्च माविमा ८ जना महिला शिक्षक रहेका छन् । छात्रहरु भन्दा छात्राहरुको संख्या बढी रहेको जनाईएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन सुर्खेतका अध्यक्ष शिवप्रसाद उपाध्यायले विशेष गरी महिला शिक्षक प्र.अ. भएको ठाउँमा रचनात्मक काम गर्नुपर्छ भन्ने ढंगले रचनात्मक कार्य गरेको बताए । ‘केही गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने प्रयासहरु भएका छन् । महिला शिक्षकको योग्यता र क्षमताको मूल्याङकन गरी प्र.अ.मा नियुक्ति गर्नुपर्छ’–अध्यक्ष उपाध्याले सबैकावीचमा छलफल सम्वादका माध्यमबाट महिला प्र.अ. को संख्या बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।
यस अघि जन उच्च माध्यमिक विद्यालय वीरेन्द्रनगरमा महिला शिक्षिका लक्ष्मि खड्कालाई समेत प्राचार्य बनाउने प्रयास भएको थियो ।अन्तः आन्तरिक खिचातानीका कारण निमित्त प्राचार्यको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका खड्का प्राचार्य बनाईएन् ।
Posted by Deepak at 1:25 AM